Nkwadosị Aka - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Mkpịsị aka na-eji aja aja na-eme ka ụmụ nwanyị mara mma
Ụmụ nwanyị na-eji akara ejiji na-acha aja aja anya; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
2. Eji aka na-acha uhie uhie na-eme ka nwoke mara mma
Ụmụ nwanyị na-eji egbugbere ọnụ egbu egbu na-eji ejiji na-acha aja aja, na-eme ka ha mara mma
3. Eji egbu egbu na -eme ka ụmụ nwanyị mara mma
Ụmụ nwanyị na-eji akara mkpịsị aka na-acha akwụkwọ ndụ ojii; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
4. Mkpịsị aka na ogwe aka dị ala na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na-enwe mmasị na mkpịsị aka nke ogwe aka na ogwe aka ala na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
5. Mkpịsị aka aka na ogwe aka dị elu na -emepụta mkpịsị ojii na-eme ka nwoke dị mma
Ndị na-ahụ n'anya na-ahụ n'anya ga-enwe mmasị na mkpịsị aka na ogwe aka ha na-eji ejiji ink ojii. Ụdị egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ ahụ iji mee ka anya dị mma
6. Mkpịsị aka aka na aka aka nri dị elu na-eme ka nwoke dị mma
Nwoke na-enwe mmasị inwe egbu egbu na ogwe aka aka nri ya na ntinye mkpịsị aka. Nke a na-enye anya dị mma
7. Ogbugbu nke aka na ogwe aka nri nke aka ya na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na-enwe mmasị iji aka ha na-egbu egbu na aka nri aka nri aka ya. Nke a na-enye ihe dị mma.
8. Ogbugbu nke aka na ogwe aka ekpe aka na-eme ka mmadụ na-ele anya
Ndị mmadụ ga-ahọrọ iji akara aka nke a na ogwe aka ekpe nke aka ya dịka nkedo nke ink. Nke a na-eweta ọdịdị ha.
9. Ogbugbu eji aka ya na-eji nko osisi ink, onu aka aka nri aka na-ebute umu mmadu
Ndị mmadụ na-achọ ịnwe egbu egbu na mkpịsị aka ink nke dị n'aka nri. Ụdị egbu egbu a na-egbuke egbuke, nke na-enye ha ọdịdị ahụ
10. Mgbu aka na aka ekpe dị n'aka ekpe na-eweta ọmarịcha anya
Ụmụ agbọghọ dị ka ifufe na-egbuke egbuke egbuke mara mma na aka ekpe aka ekpe na ink nke ink. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma.
11. Ogbugbu ejiri ya na agba agba gbara ọhụụ ga-eme ka ọkpụkpụ anụ ahụ na-enye ya anya
Ndị na-acha ọcha akpụkpọ anụ ga-ahọrọ akara ime mmụọ nke ogwe aka nke ogwe aka. Nchepụta Ink nke Aghụghọ Aghụghọ a ga-enye ha anya swagger
12. Eji aka na-egbuke egbuke na-eme ka nwoke mara mma
Ndị mmadụ na-aga iji egbu egbu na-eji akara ejiji ink; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
nnụnụegbugbu maka ụmụ agbọghọmma tattoosGeometric TattoosEgwu ugoụmụnne mgbuegbu egbu osisi lotusima ima mmaegbu egbu egbudi na nwunyena-adọ aka mmaegbugbu egbugbuAnkle Tattoosagbụrụ ebondị mmụọ oziegbu egbuegbu egbu mmiriakwara obikoi ika tattooUche obindị na-egbuke egbukeNtuba ntugharin'olu oluaka mma akaọdụm ọdụmzodiac akara akaraazụ azụakara ntụpọaka akamehndi imewerip tattoosna-egbu egbuarịlịka arịlịkaaka akaegbu egbu maka ụmụ nwokeudara okooko osisiegbu egbu ebighi ebingwusi pusiechiche egbugbuỤdị ekpomkpaegwu egwuụkwụ akaọnwa tattoosakpị akpịokpueze okpuezeegbu egbu diamondegbu egbu hennaenyí egbu egbuenyi kacha mma enyiegbu egbu okpu